Dabaal Dega Magaaladda Linköping | Visit Linköping
Dabaal Dega Magaaladda Linköping
Dabaal Degdega Magaaladda Linköping waa dhacdhaca ugu weyn, waxay soo jiidata ku dhawaad 300,000 oo marti sanadkiiba magaaladda. Sanadkan, xaflada waxay dhici doontaa inta u dhaxeysa 21 Ogosto iyo 25 Ogosto.
Inta lagu jiro muddo toddobaad ah, maagaladda waa buux dhaafin doonaa hawlo kala duwan loogu talagalay carruurta, dhalinyarada iyo dadka waa weyn. Waxaa jiri doono bandhigyo, suuqyada cuntada, heeso, dhaqanka, ciyaararha, hawlaha, isku day iyo kuwa kale oo oo aad u badan. Booqashada Dabaal Degga Magaaladda Linköping gabi ahaanba waa lacg la'aan.
Heesaha waxay qeyb ka weyn ka yihiin Dabaal Dega Magaaladda Linköping. Heesaha waxaa lagu soo bandhiga masraxyada xarunta Linköping oo dhan maalin ...
Dhowr dhacdo oo isboortis ayaa dhici doonaa inta lagu jiro Dabaal dega Magaaladda Linköping, waxaa ku jira labada dhaco oo aad ka qeyb qaadan karto ...
Inta lagu jiro Dabaal dega Magaalada Linköping, waxaad isku dayi kartaa cuntada ee afar geeskooda oo dhan ee the world at the Geraud International ...